Nissan Skyline 1990 (#683167) ကို Ahlone မြို့နယ်တွင်ရောင... | CarsDB
Nissan Skyline 1990
Lot Number: #683167
Car Care Myanmar
Fully loaded GTT with RB20DET.All genuine Performance parts and Audio system. Well maintained and will be sold to serious buyes only.
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Car Care Myanmar မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Nissan Skyline 1990 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့်အချိန် 14 ရက်